Semalt - Agencylọ Ọrụ Dijitalụ World Renown
Semalt bụ ụlọ ọrụ dijitalụ ama ama ama na ụwa nke ama ama na Nchọpụta Nchọpụta Ihe Nchịkwa na Ntanetị Weebụ . Site na oge ịpịrị na websaịtị ha, o doro anya na ha nwere nghọta miri emi banyere etu esi adọta ntanetị na ntanetị, ịkpọ oku na omume, yana iji agba agba. Site na otu ndi otu ndi okacha amara nke maara otutu otutu asusu, o di nfe ihu ihe mere Semalt ji nwee otutu nyocha oma na nsonaazụ sitere na gburugburu ụwa. Ehee, ị gaghị echezọ ịsị Turbo theurt!
Tupu anyị amaba n’ime nchịkọta ha, ka anyị mebie ihe niile ha na-eme.
Search Ngini Nchọpụta (nke a makwaara dị ka SEO) na-eme ka okporo ụzọ a na-eduzi na weebụsaịtị gị na-abawanye ụba site na ị na-abawanye ọhụhụ peeji gị na Njin Search. Iji gosi na Nchọpụta Ihe Nchọpụta nke onye ọrụ, peeji nke gị ga-adị ndekọ. Ndepụta ntanetị bụ usoro Nchọpụta na-anakọta ozi na Spider (nke a makwaara dị ka Bot ma ọ bụ Crawler) ya mere ọ nwere ike hazie ọdịnaya maka mkpa maka ihe ọ bụla ọzọ na nchekwa data ya. Ka otu ududo wee chọta peeji gị, ha ga - achọ ịchọpụta njikọ gị mgbe ọ na - achọpụta weebụsaịtị ọzọ. A na-akpọ nchọpụta a Backlinking.
Ozugbo onye na-ese onyinyo chọtara peeji gị, ọ ga-anakọta ozi niile ọ nwere ike ịchọta ruo mgbe akpọghachi azụ na saịtị gị. Ihe Nchọgharị ahụ ga-enye ọdịnaya gị akara dị mkpa, nke nwere ike inyere gị aka ma ọ bụ merụọ ọnụnọ SERP gị (Search Ngini na Ntanetị Search Ngini). Mgbe Search Ngini na-ahazi ibe gị, ọ ga-ekpebi ihe ndị a:
Asụsụ Ọdịnaya: Onye ọrụ ahụ enwere ike ịgụ ọdịnaya gị?
Mkpa Ọdịnaya: ọdịnaya gị ọ dị mkpa n'okwu ọchụchọ?
Isi ederede: Kedu ka ọdịnaya gị si yie aha ọchụchọ?
Peeji mbu: Gini bu isi okwu gi?
Ihe onyonyo na eserese: Ihe a na-ahụ anya na-akwado ọdịnaya gị?
Ọnọdụ: Ọnọdụ ọdịnaya gị ọ dabere?
N'iji usoro SEO gị niile edozi nke ọma, ịkwesịrị ịnwe ntanetị nke ndị ahịa nwere ịpị site na weebụsaịtị gị. Mana olee otu ị ga - esi kwuo n’ezie na ebe nrụọrụ weebụ gị na - erute ndị na - ege ya ntị? Ọ bụghị naanị nke ahụ, mana olee otu ị ga - esi mara ma ndị na - ege gị ntị na - emeghachi omume n'ụzọ ịchọrọ ha? N’ezie, anyị nwere ike ilele akụkọ ịre ahịa gị mgbe niile ma lee nke ahụ anya. Mana akụkọ akụkọ niile na-ere gị na-agwa gị bụ ego ole ị nwetara. Ọ bụrụ n’ezie ịchọrọ ịghọta etu onye ahịa si emeghachi na weebụsaịtị gị, ị ga-agbanye ala n’ime mmemme nyocha nke websaịtị.
A na-eji nyocha weebụ iji tụọ, kpokọta, ma nyochaa akụkọ iji nwee ike ịghọta omume ndị na-ege gị ntị ka ị wee nwee ike bulie weebụsaịtị gị nke ọma. Mmemme ndị a ga-enye gị ozi dị mkpa na ihe ndị a.
Onu ogugu nke nleta ndi puru iche
Onu ogugu nke nleta ugboro ole
Nke ahụ bụ ọtụtụ ozi iji sachaa! Mana ọ dị mkpa ka ịnwe nke a dịka ọ ga - enyere gị aka bulie ọnụnọ weebụ gị zuru oke. Site na iji nyocha weebụ, ịnwere ike ịme mkpebi ziri ezi na ihe ndị a:
Kpebie isiokwu ndị na-adọba okporo ụzọ gaa na saịtị gị.
Kpebie ụdị ngwaahịa na-adọrọ uche kacha mma.
Gbanwe ọnụahịa sitere na mmekọrịta ndị ahịa.
Enweghi ohere iji meziwanye.
Mepụta ọdịnaya haziri maka omume igwe mmadụ gị.
Ọ bụ ezie na ọ ga-ekwe omume ịme ihe a niile, ọ ga-ewe gị oge iwezuga azụmaahịa gị nke ọma. Dị ka ọ dị na ndụ n'ezie, ị ga na-adọta ọtụtụ ndị na-ere windo karịa mgbe ị na-achọ ndị ahịa. Yabụ na ị ga - etinye ike gị niile na - akpọbata ọtụtụ mmadụ dị ka o kwere mee. Ọ bụ ya mere ị ga-eji kpọọ Semalt!
Ọ bụrụ n’ilelee akwụkwọ ikpe ha, ha enyerela ọtụtụ narị ụlọ ọrụ nọ gburugburu ụwa aka ịnweta ọnụọgụ pịa dị mkpa iji baara uru. Ikpe nke ọ bụla nwere njikọ nke na-aga n'ime ihe ndị a:
Nkọwapụta oru ngo
Mpempe akwụkwọ Tupu na Mgbe Metric
Dịka ị pụrụ ịhụ na clip m nyere n’elu, Semalt mụbara ụlọ ọrụ ndị a ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa kwa ọnwa site na ndị ọrụ 114 na ndị ọrụ 1,771! Nke ahụ bụ ugboro 15 ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ha nwere na mbụ! Nke a bụ ihe onye ahịa ahụ kwuru gbasara nsonaazụ ha:
Ma ọ bụrụ na nyocha edere na nọmba siri ike ezughị, Semalt nwekwara peeji nke raara nye nyocha vidiyo. Nyocha ndị a sitere n'aka ndị ahịa nwere afọ ojuju n'ụwa niile!
Ya mere, olee otu Semalt ga - esi nye gị otu nsonaazụ ahụ? Ihe mbu igha eme bu iwepu aka n’onwunwa ha nke Yavuz sitere na surgerytr.com. Ozugbo ịpịrị Semalt.com, ị ga-ahụ ụlọ ọrụ ga-achọpụta weebụsaịtị gị ozugbo. Iji hụ akụkọ a, ihe ị ga - eme bụ ịmepụta akaụntụ. Nkwupụta a ga-achịkọta nsonaazụ ọ hụrụ na webpage gị ma tụọ ngwugwu nke ga - enyere aka iwelie nsonaazụ ndị a. Ihe ngwugwu ndị ahụ gụnyere AutoSEO , FullSEO , na nchịkọta.
AutoSEO na-enye gị ngwaọrụ ndị a:
Mmelite Nzipụta Weebụsaịtị
Na peeji nke kachasị
Akụkọ Nchịkọta Weebụ
Ndị a bụ ihe owuwu dị mkpa iji bido mkpọsa SEO na-aga nke ọma! Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-amụ SEO ka ị na-aga, ngwaọrụ ndị dị gị n'ime ngwugwu Auto Auto dị mfe iji tinye na weebụsaịtị gị. Nke a bụ ngwugwu Semalt na-enye, ngwa ngwa, na nke dị irè.
You nwere ike ịzụta ikpe ụbọchị 14 maka cents 99. Mgbe nke ahụ gasị, ịnwere ike ịzụta ngwugwu kwa ọnwa maka ọnụahịa ndị a:
1 ọnwa maka $ 99
Ọnwa 3 maka $ 267
Ọnwa isii maka $ 504
Afọ 1 maka $ 891
Ihe ngwugwu FullSEO nwere otu n'ime ndị ọkachamara Semalt emezuru na-eme ndị a:
Ntughari nke ime
Ide Ihe Ederede
Nkwado na Nkwado
Site na atụmatụ a, ebumnuche Semalt bụ ịmanye ebe nrụọrụ weebụ gị na oke nke SERPs. E kenyere otu n’ime ndị ọkachamara tozuru oke na ibe gị ka ha wee nwee ike iji ihe niile ha nwere ime ka ibe gị nwee ike ịga nke ọma. Dịka ị hụworo n’elu na surgerytr.com, ha nwere ike wulie elu n’ime peeji ahụ wee bido ịrụ ọrụ anwansi ha ozugbo.
Ma otu ihe ị chọrọ ịmatakwu banyere ndị ọkachamara ha, ị nwere ike ịchọta ihe oyiyi ha niile na weebụsaịtị. Dịka ọmụmaatụ, egosipụtara Shaarenrenko (Ọkachamara SEO) na Natalia Khachaturyan (Strategist ọdịnaya) dị ka "na nche maka ọkwa gị" na ibe ihu nke weebụsaịtị Semalt. N'okpuru ha bụ ndepụta nke rụzuru ha rụpụtara ka ha na-arụ ọrụ maka Semalt.
Ọtụtụ n'ime ndị ọkachamara ha na-edekwa ederede maka blọọgụ Semalt. Vladislav Polikevych (Onye edemede edemede), Olga Pyrozhenko (Onye njikwa ahịa), na Eugene Serbin (Isi nke SEO) edeela ọtụtụ isiokwu banyere ọnọdụ SEO dị ugbu a na iji ahịa gị. M kwuru banyere ya na ha nwere peeji iri abụọ na isii nke blọọgụ? N’inwe edemede ise na ibe ọ bụla na isiokwu abụọ na nke ikpeazụ, nke ahụ bụ mkpokọta narị abụọ na iri asaa na asaa (dị ka ugbu a) dị EGO! N'agbata akaebe nke ndị ahịa ha na isiokwu ha na-enye n'efu na blọọgụ ha, ị nwere ọtụtụ ihe ị nwere ike ịtụle tupu ịme mkpebi ịzụta ngwugwu SEO zuru ezu.
Ihe ngwugwu SEO zuru ezu dịgasị iche n'etiti ndị ahịa, yabụ, ọ dị mwute ikwu na enweghị m ike ịnye gị ọnụahịa ọnụahịa. Mana dị ka m kwuru n’elu, ọnụ ọgụgụ dị ịtụnanya nke nyocha dị mma na mkpọsa na-aga nke ọma na-ekwu okwu bara uru ngwugwu Semalt zuru oke SEO. Ha na-enyekwa ego ma ọ bụrụ n’ịnye aha maka ndebanye aha kwa ọnwa:
Ọnwa 3 na-enye 10% apụ
Ọnwa isii na-enye 15% apụ
12 ọnwa na-enye 25% apụ
N'ikpeazụ, enwere ngwugwu Web Analytics Semalt, nke gụnyere ọrụ ndị a:
Nlele ogo weebụ
Mepee ọhụhụ webụsaịtị
Nyochaa weebụsaịtị ndị na-asọmpi
Chọpụta ohere njirimara na ibe
Anata mkpesa webụsaịtị zuru oke
Nke a bụ ngwugwu na-agwa gị ma ọrụ gị niile na-eduga gị gaa nke ọma ma ọ bụ na-ekpughe na ị nwere ọrụ ị ga-arụ. Na-enweghị ihe ọmụma a, ịnweghị ike ịgbasa ebe nrụọrụ weebụ gị na elu nke SERPs, ma ọ bụ nọrọ na elu ma ọ bụrụ na ị nọrọ ebe ahụ. Ihe omuma bu ike. Site n'ike nke a, ị nwere ike ịme ụfọdụ ndị a:
Kpee asọmpi gị iji hụ ihe ha na-eme
Jiri nyocha gị nke ọma were ihe na-eme ugbu a
Choputa ohere n’ime saiti nke gi
Banyere ịnye ọnụahịa, ha na-enye ngwugwu nwere isiokwu na ngwugwu ngwugwu. Ha dị ka nke a:
$ 69 / ọnwa maka isi okwu 300, ọrụ 3, na ọnwa 3 nke akụkọ ntolite
$ 99 / ọnwa maka mkpụrụokwu 1,000, ọrụ 10, yana afọ 1 nke akụkọ ntolite
$ 249 / ọnwa maka mkpụrụokwu 10,000, ọrụ na-akparaghị ókè, na akụkọ ntolite akparaghị ókè
Ọ bụrụ n ’idebanye aha maka ọtụtụ ọnwa, ị nwere ike ichebe ihe ndị a:
N'agbata nyocha niile dị mma nke Semalt ji nganga gosipụta na weebụsaịtị ha, blọọgụ na accolades nke ndị ọkachamara ọtụtụ asụsụ na-arụ, yana ọnụahịa ọnụ ala ha, ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara Semalt ji bụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ dijitalụ kachasị mma n'ụwa. Naanị site na ịgagharị na weebụsaịtị ha, ị ga - ahụ na ha na - eche n'ezie maka ihe ha na - eme maka SEO na nchịkọta